प्रतिनिधि र प्रदेश सभा चुनावमा तीन वटा मतपत्र, मतदान कसरी गर्ने ? - Khula Patra
प्रतिनिधि र प्रदेश सभा चुनावमा तीन वटा मतपत्र, मतदान कसरी गर्ने ?
प्रकाशित समय: ६:५५:४४
गुराँस न्युज । काठमाडाैँ ।
निर्वाचन आयोगले युरोपियन युनियन (इयू)का प्रतिनिधिलाई कञ्चनपुरको निर्वाचन पर्यवेक्षणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले इयूका प्रतिनिधि अनावश्यक चासो देखाएको निष्कर्ष निकालेको छ । यसबारे आयोगले शुक्रबार इयूका नेपाल प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै छ । ‘कञ्चनपुर जिल्लामा पर्यवेक्षणमा गएको इयूको टोलीले गलत गरेको पुष्टि भएको छ । तर, इयूका नेपाल प्रतिनिधिसँग छलफल गरेपछि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ,’ आयोगका आयुक्त नरेन्द्र दाहालले नयाँ पत्रिकासँग भने । टोलीलाई फिर्ता बोलाइनेछ । कञ्चनपुरमा परिचालित इयूको पर्यवेक्षण टोलीमा लार्स–गोरेन, प्लाग मेन, इभा सुहोनन् र नेपाली दोभाषे पुष्कर पाण्डे थिए । पर्यवेक्षणका नाममा अदालत र राजनीतिक दलका गोप्य सूचना माग गर्नेजस्तो आपत्तिजनक कार्य गरेको आरोप लागेपछि बुधबार मुख्य निर्वाचन अधिकृत डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यले उनीहरूमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेका थिए ।